အိပ်ပျော်နေရင်း ဘာ့ကြောင့် မျက်ခမ်းတွေလှုပ်လာတာလဲ??? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အိပ်ပျော်နေရင်း ဘာ့ကြောင့် မျက်ခမ်းတွေလှုပ်လာတာလဲ???
သင်ဟာ ညဘက်အိပ်နေရင်းနဲ့ သင့်ရဲ့ မျက်ခမ်းတွေလှုပ်လာတာကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေယုံကြည်ထားတာကတော့ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မျက်ခမ်းတွေလှုပ်တာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်တွေ့နေရတာကို စိတ်အနေအထားရဲ့ တုံ့ပြန်မှု ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိတော့ ဘယ်သူကမှ သက်သေမပြနိုင်သေးပါဘူး။
သုတေသီတွေက ဒါကို အဖြေရှာပြီး သပ်သေပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အိပ်မက်မက်နေစဉ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ နိုးကြားနေစဉ်မှာတုန်းက ပုံရိပ်တွေကို တုံ့ပြန်တဲ့အတိုင်းပဲ အိပ်မက်ထဲက ပုံရိပ်တွေကို တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာကို သုတေသီတွေက သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို လေ့လာမှုကိုတော့ Nature Communications ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး သုတေသီတွေဟာ အိပ်စက်နေချိန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ဆဲလ် တွေ တစ်ခုချင်းစီ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် က ဒေါက်တာ Itzhak Frie ဟာ လူ ၁၉ ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်တွေထဲကို အီလက်ထရုတ် တွေထည့်သွင်းပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
၂ ပတ်ခန့် ကြာတဲ့အခါမှာ အီလက်ထုတ်တွေက ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ အာရုံကြော တစ်ခုချင်းစီ ရဲ့လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သုတေသီတွေက အီလက်ထရုတ် မှတ်တမ်းတွေက ရတဲ့ ဒေတာ တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ အိပ်စက်ချိန်တွေမှာ ဦးနှောက်ထဲက ဆဲလ် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တုံ့ပြန်မှု ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရတော့ အိပ်စက်နေချိန်မှာ မျက်လုံး နဲ့ မျက်ခမ်းတွေ လှုပ်ခတ်သွားတာဟာ အိပ်မက်ထဲက ပုံရိပ်တွေအသစ်ပြောင်းလဲတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ နိုးကြားနေတဲ့အချိန်မှာ ပုံရိပ် အသစ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်လိုက်ရင် ထို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အိပ်မက်ထဲက ဖြစ်ရပ်အချို့ကို ပြန်လည် မြင်ယောင်သွားစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသီတွေစဉ်းစားလိုက်တာကတော့ အနာဂါတ်မှာ ထပ်မံ ပြုလုပ်မယ့် သုတေသန ကတော့ ဦးနှောက် ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စာသား (သို့) ပုံရိပ်တွေအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုပြီး အိပ်မက်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ပဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။